Gaadiidka Dadweynaha ee Istanbul ayaa hoos udhaca Maalin kasta | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGaadiidka Dadweynaha ee Magaalada Istanbul ayaa Dhimanaya Maalinba
Gaadiidka Dadweynaha ee Magaalada Istanbul ayaa Dhimanaya Maalinba
24 / 03 / 2020 34 Istanbul, Tareenka Tareenka, tareenka, Tariin, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, Metro, Metrobus, TURKEY, taraamka
Isticmaalka gaadiidka dadweynaha ee Istanbul ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii yaraanaya
Xafiiska Tirakoobka Magaalada Istanbul, oo lagu aasaasay hoos imaadka BİMTAŞ, oo ah mid hoosaad ku leh Magaalada Istanbul ee Magaalo Xeebeedka, ayaa xogta la wadaagaya sida gaadiidka dadweynaha ee Istanbul ay u saameysay cudurka faafa akoonkiisa rasmiga ah ee Twitter. Intaa waxaa u dheer, madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu iyo dowladda hoose SözcüSü Murat Ongun sidoo kale waxay la wadaageysaa tirakoobka la xiriira safarka akoonyadooda shaqsiyeed ee Twitter.
Marka xogta gaadiid la falanqeeyo, waxaa la arkaa in hoos udhacii ugu horreeyay ee muuqda uu dhacay Maarso 10. Ilaa iyo maanta, waxaa si isdaba joog ah hoos ugu dhacay tirada dadka isticmaala gaadiidka dadweynaha.
Marka isbedelka gaadiidka dadweynaha la barbar dhigo usbuucii hore ee maalinba maalinta ka dambeysa, waxaa loo arkaa inuu si weyn hoos ugu dhacay tirada dadka isticmaalaya metro, metrobus iyo basaska gaar ahaan 14ka Maarso.
Isticmaalka Gaadiidka Dadweynaha ee Shakhsiyaadka 65 sano iyo wixii ka sareeyay ayaa hoos u dhacay 69% usbuucii la soo dhaafay
Iyada oo wareegto la daabacay Maarso 21, 2020, Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa ku soo rogtay bandow iyada oo laga xaddiday shakhsiyaadka jira 65 sano iyo wixii ka weyn inay ka baxaan guryahooda. Kahor ogeysiiskaan, waxaan ku baari karnaa habka gaadiidka ee da'da 60 jirka iyo wixii ka weyn iyo da'da 65 iyo wixii ka weyn ee laba-iyo-labaatanka ah ee uu la wadaago barta twitter-ka Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu.
Sida lagu arki karo garaafka, tirada dadka 14 sano jir ah ama ka weyn ee isticmaalaya tareenka dhulka hoostiisa, metrobus ama jidadka basaska ee magaalada Istanbul ayaa hoos u dhacay 65% Sabtidii, Maarso 37, marka la barbar dhigo usbuucii hore, iyo tirada dadka da’adoodu tahay 21 iyo wixii ka sareeya iyadoo la adeegsanayo gaadiidka dadweynaha Sabtida, Maarso 65, 14 Maarso ' hoos u dhacay 69% marka loo eego.
Tirada Ardayda Isticmaalaya Gaadiidka Dadweynaha ee Magaalada Istanbul waxay ku yaaceen 75% Hal Isbuuc
Magaalada Istanbul waxaa ku yaal 13 jaamacadood, oo 44 ka mid ah ay yihiin gobol halka 57 ka mid ah ay yihiin aasaas. Intaas waxaa sii dheer, waxaa sidoo kale jira 4 iskuul aasaasi ah. Macnaha halkan Istanbul guriga ku saabsan 30%,, samaynta jaamacadaha dalka Turkiga. Tirada ardayda wax ka barata dugsiga sare ee magaalada Istanbul waa 1 milyan 834.
Intaa waxaa u dheer, tiro dhan 2 milyan 840 kun 498 oo arday ah ayaa wax ka barta machadyada ku xiran Wasaaradda Waxbarashada ee Istanbul. Tirada guud ee ardayda dugsiga hoose, sare iyo sare ee dhigta ardayda jaamacadaha ayaa gaaraya 3,8 milyan.
Iyada oo la raacayo go'aannadii la qaatay Maarso 12, ilaa iyo Maarso 16, waxbarashadii jaamacadaha ayaa la joojiyay muddo 3 toddobaad ah. Jaamacado badan ayaa ku dhawaaqay inay waxbarashadooda sii wadan doonaan khadka tooska ah wixii ka dambeeya taariikhdaas. Si kastaba ha noqotee, waxaa la go'aamiyay in la bilaabo waxbarashada masaafada ah illaa iyo 23-ka Maarso, iyada oo dugsiyadu fasax ku jireen hal toddobaad heerarka dugsiga hoose, sare iyo sare.
Markaan eegno xogta gaadiidka dadweynaha ee ardayda ku sugan Istanbul, waxaan aragnaa hoos u dhac 11% ah Arbacadii, Maarso 5 marka loo eego usbuucii hore. Si kastaba ha noqotee, Arbacada, Maarso 18, ka dib nasasho ka timid dhammaan heerarka waxbarashada; Tirada ardayda isticmaalaya metro, metrobus ama adeegyada basaska ayaa hoos u dhacay 75% marka loo eego isla maalintaas todobaadkii hore.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan eegnay isticmaalka gaadiidka dadweynaha ee Istanbul bishii Marso toddobo maalmood usbuucii.
Maalintii lagu dhawaaqay kiiska ugu horeeya ee coronavirus, maalintii Arbacada, Maarso 11, tirada dadka isticmaalaya gaadiidka dadweynaha ee Istanbul ayaa hoos udhacay 5,9%.
Hoos udhaca tirada dadka isticmaalaya metro, metrobus iyo adeegyada basaska ee Istanbul waxay gaareen 18% Arbacadii, Maarso 59,1, usbuuc buuxa kadib. maalintii hore (March 17) fiidkii agagaarka 23:58 Wasiirka Caafimaadka Fahrettin Koca, tirada xaaladaha soo sara kacay in 98, iyo Turkey ayaa sheegay in ay dadweynaha ee bukaanka marka hore ku dhintay coronavirus.
Covidien ku dhawaaqay maalin ka dib markii ugu horeysay ee 19 xaaladood ee Turkey, on 12 March, tirada dadka isticmaalaya khadadka gaadiidka dadweynaha, hoos 8% marka la barbar dhigo toddobaadkii hore isla maalintaas.
Kadib markii tirada guud ee kiisasku ay kordhay 18 habeenki Maarso 191 iyo tirada dhimashada ay gaartey 2, tirada dadka isticmaala gaadiidka dadweynaha Khamiista, 19ka Maarso ayaa hoos u dhacday 12% marka la barbar dhigo 64-kii Maarso.
Maalinta seddexaad ee wadaagga dadweynaha ee kiiska ugu horeeya ee coronavirus, Jimcaha 13 Maarso; Tirada dadka isticmaalaya metro, metrobus iyo jidadka basaska ayaa hoos u dhacay 16% marka loo eego usbuucii hore.
Ka dib markii tirada kiisasku ay kor u kacday 359 iyo tirada bukaannada COVID-19 ee dhintay, illaa 4, hoos u dhacani wuxuu gaadhay 20% Jimcihii, Maarso 64.
Ka dib markii wadarta tirada kiisaska coronavirus ay kor u kacday 5, tirada dadka isticmaalaya khadadka gaadiidka dadweynaha ee Istanbul Sabtida, Maarso 14 ayaa hoos u dhacday 37% marka loo eego usbuucii hore.
Xogta gaadiidka dadweynaha ee barta twitter-ka ayaa lagu sheegay Sabtida, Maarso 21, 2020 lama heli karo.
Ka dib markii tirada kiisaska ay gaareen illaa 14 Sabtida, Maarso 6, waxaa hoos u dhacay 15% tirada dadka isticmaalaya gaadiidka dadweynaha ee magaalada Istanbul Axadda, Maarso 48.
Intaa waxa u dheer, tirada dadka isticmaalaya metro, metrobus iyo adeegyada basaska ee magaalada Istanbul ayaa hoos u dhacay 21% maalintii Axadda, Maarso 947, iyada oo tirada kiisaska ay kordheen 19 habeenka Maarso 21 iyo tirada bukaannada COVID-22 ay u dhinteen 68 maalintii Axadda, Maarso XNUMX.
Ka dib markii lagu dhawaaqay oo ka mid ah 19 kiis ugu horeysay ee Turkey Covidien-yimaadaan, marka hore Monday, March 16, ee Istanbul Metro, hoos u dhac Metrobus in isticmaalka gaadiidka dadweynaha sida basaska oo helay 44%.
Covidien-19 xaaladood marka hore on Tuesday, March 17 ilaa dhawaaqo tirada xaaladaha ay gaareen 47 ee Turkey. Sidaas awgeed, Talaadadii, 17-kii Maarso, tirada dadka isticmaalaya gaadiidka dadweynaha ee Istanbul ayaa hoos u dhacay 52% marka loo eego toddobaadkii hore.
source: Doğrulukpa ah
Tirada rakaabka rakaabka ee Batman waxay kordhisaa Maalinta Maalinta
Muhiimadda Caqabadaha Boodka ah
Dhimashada Duulimaadka Marmaray ..! Codsi cusub ayaa bilaabmaya Berrito!
350 oo loogu talogalay in loogu adeego kumanaan dad ah oo ku nool Kayseri
Isgoyska Iibiya wuxuu kordhayaa maalin kasta
HAVAİST Maalin kasta 140 Soomaliyaasha Madaarka Istanbul
Nidaamka Isgaadhsiinta ee Tokyo wuxuu dhigayaa Milyan Qof 20 Maalin kasta
Gaadiidka iyo basaska ee Kayseri maalin kasta 9 bin 100
Tareenada Hindiya waxay qaadaan 23 million rakaab maalin walba (Sawir Sawir)
Xafiiska Tirakoobka Istanbul
Wasaaradda Ganacsiga Ayaa Soo Bandhigtay Bayaan Ku Saabsan Tallaabooyinka Dekadda Çeşme